Fivoriamben'ny fantsom-panafody tsara indrindra (fenon'ny SAE J1401) mpanamboatra sy orinasa | Jinxing
Brake Tube Assembly (fenon'ny SAE J1401)
Ny fivorian'ny fantson-drivotra no ampahany manandanja amin'ny rafitry ny fiara. Misy fitaovana famokarana mandroso sy fitaovana fitiliana ao amin'ny orinasanay hiantohana ny kalitaon'ny vokatra. Ny fantson-tsolika novokarinay dia manana ny mampiavaka ny herin'ny vaky, ny fanitarana volumetrika ambany, ny fanoherana ny toetr'andro tena tsara sns. Ny vokatra dia mifanaraka tanteraka amin'ny GB16897-2010, SAE J1401. Ho fanampin'izany, nampiharina ho an'ny patanty ho an'ny vokatra marobe izahay.
Ny fivorian'ny fantson-tsolika hydraulic dia misy fantsom-panafody sy mpiray fantsom-pifandraisana. Misy fifandraisana maharitra eo amin'ny fantson-tsolika sy ny fantson-tsolika volo, ary ny fifandraisana dia ahatongavana amin'ny alàlan'ny crumpling na extrusion mangatsiaka amin'ny ampahany iraisana mifandraika amin'ny fantsona.
Ny fivorian'ny fantson-drano hydraulic na ny faritra mifanentana amin'izany, ambanin'ny fisedrana voalaza etsy ambony, dia tokony hahatratra ny fepetra takiana voalaza ao amin'ity lahatsoratra ity rehefa hosedraina araka ireto fomba manaraka ireto.
Fivoahan'ny lavaka anatiny aorian'ny vozona
Fifanentanana avo lenta ary fantsom-pahazavana kely miondrika, maodely maivana maivana mitatra amin'ny DN 76
Fisehoana amin'ny fantsona: ny lamba mihosin-damba (tsy azo alefa ny haavon'ny glossy amin'ny savaivony anatiny 25.4mm na latsaka)
Sombin-tsarimihetsika: fanontana na taratasy
Loko fantsona: mainty, mena, manga, mavo, maintso, fotsy, sns.
Ny habaka fametrahana dia fantsona kely, salantsalany ary tsindry ambany, fantsom-pamerenan'ny solika (fantsom-pifoka DN ≤ 31)
Menaka mineraly, menaka fanolanana ary menaka rapeseed, menaka glycol sy polyethylene glycol base, menaka base ester synthetic, menaka emulsified, rano
Famantarana ny fantsona: HYDRAULIC Hose EN857 1SC 1 ″ (DN25) WP 88BAR 1280PSI
Faritra hafanana miasa mitohy: -40 ° F / + 212 ° F; -40 ° C / + 100 ° C
Ny mari-pana miasa farany ambony: 250 ° F 121 ° C
Mpampitohy: SHF- karazana fihazonana
Vongan-tsiranoka anaty: fingotra vita amin'ny menaka tsy mahazaka solika
Fanamafisana fanamafisana: kofehy vy misy tadiny vy 1
Sosona ivelany: fingotra sentetika mahatohitra toetr'andro
Fepetran'ny fampiharana: EN 857 1SC sy IS 11237-1 1SC
Fantsom-by tariby vy, fantsom-pamokarana avo, fantsom-pamokarana avo, fantsom-pifandraisana, fantsom-pifandraisana, fantsom-piadiana, hafanana avo lenta sy fantsom-panafody avo lenta ho an'ny milina fanokafana vy
Teo aloha: Nylon Air freins Hose
Manaraka: Kely novakin'ny brides
Kitapo fivorian'ny Clutch
Kitapo fivorian'ny pedal Clutch